OpenExpo 2018 yekutanga danho kudzidziswa | Linux Vakapindwa muropa
OpenExpo Europe 2018 vachibhejera zvinhu, sechinyakare gore rino, rekudzidzira kudzidzisa mune yayo V vhezheni. Kudzidziswa kwemhando yepamusoro kwayakagadzira pamwe chete nevamwe vayo, zvichiita kuti mukana wekudzidzira kune avo vese vanoda kufambira mberi nekukura mune ravo basa rehunyanzvi. Kuwana hunyanzvi hunodiwa mune ramangwana rebasa kuburikidza neyakaomarara uye inodzidziswa patekinoroji yazvino nemukana wekudzidziswa nenyanzvi dzehunyanzvi haina mutengo ...
Zvese zvirongwa zvehurongwa, chaicho chokwadi, 3D, nezvimwewo, zvaunogona kutora panguva OpenExpo Europe panguva yacho June 6 na7 muLa Nave, Madrid. Saka kubva kuLxA tinokukoka iwe kuti utore chikamu uye unakirwe nemazuva asingakanganwike sezvazvinowanzoitika muchiitiko ichi chatakaita nerombo rakanaka munyika medu. Uye zvakare, iwe unofanirwa kukurumidza, nekuti nzvimbo dzese kosi dzakaganhurwa, nechinangwa chekuchengetedza yakakwira mwero wekufunda kunoshanda uye kudyidzana nemurairidzi.
Kana iwe uchifarira, unogona kuenda kumakosi gumi ekudzidzisa akasiyana, uchigona tenga yako Yekutanga Shiri Yekudzidzisa Pass kubva pano. Kana iwe uchizviita, pamusoro pezivo yawakawana, iwe uchasarudza diploma uye chitupa chekupinda chinosimbisa kutora kwako chikamu. Uye ini, semurairidzi wedzidzo pa sysadmin muGNU / Linux masystem kuburikidza nekambani yeSecurity Sentinel, kubva pane zvakaitika kwandiri uye kubva kuvadzidzi vanokwanisa kusimudzira ramangwana ravo rehunyanzvi uye vanokwanisa kukwira kuenda kuzvinzvimbo zviri nani mukati memabasa avo, ndinokurudzira iwe kune izvo hautombomira kuzviumba iwe. Tekinoroji inoshanduka, nyika inokwikwidza uye ine hunyanzvi mune chero zororo rinokusiya kunze kwekambasi inoiswa neindasitiri ...
Madingindira emakosi aya akasiyana uye ane rutsigiro rwevadyidzana vakaita seCohaerentis, Fictizia, Uxer Chikoro, Iyo Robot Academy uye Dronica Solutions. Mazuva matatu akasimba akabatwa panguva yeOpenExpo Europe 2018 kurongeka uye kongiresi ichave iri ruzivo mapiritsi kuti iwe unofanirwa kusimudzira basa rako.uye unoziva, usarasikirwa neyakagadzwa:
Musi waJune 6 kubva 10:00 a.m. kusvika 14:00 p.m.
Chirongwa cheAquata chinoenderana neArduino uye NodeMCU
Kugadzira pfungwa yekugadzira neUbatana
Yakakura Dhata yeSMEs uye Micro SMEs
OWASP Wepamusoro 10 muchidimbu
Musi waJune 6 kubva 16:00 a.m. kusvika 20:00 p.m.
UX Dhizaini mune Yechokwadi Reality uye Yakasanganiswa Reality
Musi waJune 7 kubva 10:00 a.m. kusvika 14:00 p.m.
Izvo zvavasina kumbokuudza iwe nezve kugadzira prototype. Tsanangura, simbisa uye prototype
Nhanganyaya kune Photogrammetry uye 3D modhi matekiniki ane drones
ROS-yakavakirwa robhoti chirongwa
Agilisimo mune yakashama: maitiro ekushandisa nzira dzeagile mune yako projekiti uye timu
Rangarira kutenga pasipoti yako izvozvi, uye nayo haungogone kuwana makosi chete, asiwo kumisangano yese yeCongress, Exhibition Area, Startup Connector, Community Village, Demo Makona, OpenLab, Vhura Mipiro, Meetups, uye zvimwe zvese zviitiko nenzvimbo dzeCon. Pamusoro pezvo, kana ukasaina pamberi paMay 16, 2018 Iwe unozonyoresa mune imwe yemakosi akapihwa… Chii chauri kumirira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » OpenExpo 2018 yekutanga danho rekudzidziswa
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Enrique uye izvozvi handishande.
Ini handina kunyatsonzwisisa, chiitiko ichi chingaendawo kana makambani chete?